I-Casa del Árbol @Pueblo Verde
(179 okushiwo abanye)
Gxumela endlini yethu eyizifanekiselo kakhulu!
Intanta phezu kwezihlahla, le ndlu ihlehle, izungezwe indawo enhle kanye nomfudlana omncane (ngenkathi yemvula), ibeka isimo sengqondo esihle sokubaleka kwezothando noma isikhathi sokuphumula.
Futhi sishilo ukuthi kunebhuloho elilengayo?
Indlu inepulani evulekile yokuhlala nendawo yokudlela, kanye nezindonga zengilazi ukuze ukwazi ukucwiliswa yisimo sehlathi esimangalisayo ngaso sonke isikhathi.
Iphinde ibe nethala, idekhi, kanye nedamu lokucwila ehlathini, elibhekele umfudlana. Ebusuku, ungakhanyisa izibani zentambo yomlingo ukuze ujabulele ukubhukuda kwasebusuku kakhulu.
Hlala phansi ezihlalweni ezinyakazayo, funda incwadi ngenkathi uzijabulisa kulesi simo esimangalisayo, noma udle isidlo sasekuseni eduze kwechibi.
Futhi okokugcina ake sikhulume ngokuphumula, ngemva kwakho konke, yilokho oza ngakho? Indlu inamagumbi okulala amabili ane-AC, amashawa angasese, omatilasi bezinkanyezi ezi-5 be-ergonomic anti-allergic, namakhethini amnyama ukuze kuqinisekiswe ukuphumula okuhle ebusuku. Igumbi elikhulu linombhede wendlovukazi kanti igumbi lesibili lingaba imibhede engamawele emi-2 noma umbhede ongusayizi wenkosi ongu-1.
Isikhalo esinaso kuphela ukuthi abantu abafuni ukuhamba.
4.93(179 okushiwo abanye)
4.93 out of 5 stars from 179 reviews
4.93 · 179 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-179
Impahla iseduze nayo yonke into okwamanje ikude ngokwanele ukuze ujabulele ukubaleka okuphumuzayo.
Imizuzu engu-35 kuphela ukusuka e-Samara Beach, indawo ilungele labo abafuna ukuhlola ubuhle bemvelo base-Costa Rica, amabhishi, nezigigaba bazi ukuthi bazoba nombhede othokomele abangabuya kuwo.
Ulwandle lungamamitha angamakhulu ambalwa nje phansi komgwaqo futhi i-Islita iyidolobhana elincane kakhulu kodwa eliyingqayizivele futhi eliyiqiniso. Ingxenye engcono kakhulu: Abantu bayo. Ungakwazi ukujoyina imidlalo yebhola lezinyawo yasendaweni “eplaza” njalo ngoLwesibili, uhlole imnyuziyamu yasemaphandleni, ugibele impophoma encane ephezu komgwaqo noma uthathe izithako zasendaweni ezintsha “epulperia” ukuze uziphekele ukudla kwakho.
Awuzizwa uthanda ukupheka? Bheka ekaMiguel... Uzosibonga kamuva!
Uma kwenzeka singakwazi ukuba lapho mathupha, sizobe sikushayela ucingo noma sikuthumelele i-imeyili. Ngokuvamile sizama ukuba sebhishi ngezimpelasonto njengoba sisebenza eSan Jose.
U-Doris umgcini wendlu usendaweni kusukela ngoMsombuluko kuya ngoMgqibelo 6am - 5pm futhi uyakujabulela ukukusiza uma kudingeka.
Uma kwenzeka singakwazi ukuba lapho mathupha, sizobe sikushayela ucingo noma sikuthumelele i-imeyili. Ngokuvamile sizama ukuba sebhishi ngezimpelasonto njengoba sisebenza eSan Jose…